Go'aanka Flash ee Xaraashka 'The Haydarpaşa' iyo Haykalka Sirkeci | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGo'aanka Flash ee Kiiskan oo la baabi'iyay Haydarpaşa İBB ee Haydarpaşa iyo Tennki Sirkeci
14 / 01 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
haydarpasa iyo sirkeci maxkamad ayaa diiday in la joojiyo fulinta
Shirkadaha Dawladda Hoose ee Magaalada Iimaan (IMM), TCDD Haydarpasa iyo saldhigyada Sirkeci si ay u kireeyaan goobaha bakhaarada si sharci darro ah ayaa loo baabi'iyey kadib markii la fuliyay hindisada iyo fulinta qandaraaska si loo joojiyo fulinta go'aankii ugu horreeyay la soo gudbiyey. Maxkamadda Maamulka ee 11-aad ee Magaalada Istanbul ayaa diiday codsigii iyada oo lagu saleeyay inaysan jirin shuruudo lagu joojinayo fulinta. Maxkamaddu waxay aqbashay codsigii IMM ee ahaa inuu soo fara galiyo kiiska, haatana go'aanka ugu weyn ee kansal galka qandaraaska ayaa la filayaa.
SözcüSida lagu sheegay warbixinta Ozlem Guvemli'nin; Shirkadaha xiriirka la leh İBB ee Kültür A.Ş.-İSBAK, oo u soo gudbiyay hindise TCDD Oktoobar 29, 15 si ay u kireeyaan aagagga kaydka liita ee xarumaha Haydarpaşa iyo Sirkeci ku dhawaad ​​4 sano oo loogu adeegsan karo dhaqanka iyo nashaadaadka fanka ilaa 2019 kun oo mitir oo laba jibaaran. -Metro A.Ş-Medya A.Ş waxay gudbisay dacwad 21 Oktoobar 2019 iyadoo la codsanayo joojinta iyo joojinta fulinta fulinta qandaraaska.
11kii Janaayo 6, Maxkamadda Maamulka Magaalada 2020aad ee Istanbul waxay go’aamisay codsigii kiiska ahaa ee ahaa in la joojiyo fulinta.
Go'aanka, Qodobka 27-aad ee Sharciga Nidaamka Maamulka, oo cinwaan looga dhigay Rag Ka Hortagga Maamulka Hawlaha ah, difaaca eedaysanaha ama maamulka difaaca eedaysanaha ayaa la qaaday haddii ay jiraan duruufaha ka soo baxay maxkamadda maamulka ama maxkamadaha maamulka sababo la xiriira dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka aan loo meel dayin ee ka dhashay howlaha maamulka iyo dhaqanka sharci darrada ah ee howlaha maamulka. ka dib go'aankii lagu joojinayay fulinta fulinta isagoo tixraacaya go'aanka ayaa la xusuusiyay.
Markii faylka la baarayay, waxaa la fahmay in shuruudaha ku xusan sharciga aysan wada dhicin isla markaana codsigii joojinta fulinta la diiday.
Maxkamaddu waxay diidey codsigii ahaa in la joojiyo fulinta, codsigii IMM ee ahaa inuu ku lug lahaa kiiska la aqbalay. Hadda go'aanka ugu weyn ee maxkamadda ee la baabi'inta hindisada ayaa la filayaa.
4 dalab ayaa loo gudbiyay qandaraaska kirada ee loo yaqaan 'TCDD' ee qandaraaska la qabtay 2019ta Oktoobar 4 oo 2 shirkadood laga saaray; Laga soo bilaabo shirkadda Hezarfen Consultancy Limited oo ay iska leedahay Hüseyin Avni Önder, oo 33 jir ah, shaqaale hore u ahaa IMM oo ahaa maamulaha guud ee Okçular Foundation ilaa dhowaan, iyo shirkadaha hoos taga 'İBB', Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş. Xiriirkii waa laga tagey.
Qandaraaska, halkaasoo TCDD ay ku qiyaastay lacagta kirada billaha ah inay gaareyso 30 kun oo TL, Hezarfen Consultancy wuxuu soo gudbiyay dalab 300 TL ah iyo İBB iskaashatada waxay bixinayeen xaddiga lacageed oo dhan 100 kun TL. Ka dib markii lagu dhawaaqay qandaraasyada, dhinacyada waxaa loogu yeeray inay wadahadlaan 15 maalmood gudahood markii lagu dhawaaqay qandaraaska.
In kasta oo guddiga qandaraaska laga sugayey inay ku casuun dhinacyada inay gorgortamaan, waxaa la muujiyey in qandaraaska la qabtay 18-ka Oktoobar, iyo in IMM-ga laga tirtiro qoraal iyada oo aan xitaa lagu casuumin. Waxaa lagu dhawaaqay in Hezarfen Consulting, oo lagu casuumay qandaraaska kaligiis, uu tirada ku kordhiyay 2019 kun oo rodol oo uu helay qandaraaska.
Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu wuxuu si adag uga falceliyay nidaamka qandaraaska wuxuuna yidhi, waxaan Isniintii dacwad u gudbineynaa dhamaan qareenada IMM. Immisa qareenno doonaya inay ka qeyb galaan Istanbul ayaa xeraya cabasho dambi. Dhamaan qareenadayadu waxay aadi doonaan xuquuqda 16 milyan oo qof ay aadi doonaan
Kadib, Oktoobar 21, 2019, isuduwaha dawlada hoose ee magaalada Istanbul, oo laga tirtirayay hindisada sharci darada ah, wuxuu gudbiyay dacwad kansali codsi ah oo uu kaga codsanayo Maxakamadda Maamulka Degmada inay joojiso fulinta fulinta qandaraaska.
Maxkamadda ayaa go'aansatay in ay fariisato maddaarka saddexaad!
Mashruuca Channel ee mashruuca Istanbul
3. buundada go'aanka
Mashruuca Tram Mashruuca Garoonka Dumarka Magaalada Bursa
Go'aanka Farshaxanka ee Samsun Nidaamka Tareenka
Go'aanka kiiska gawaarida
Kiiska Saldhigga tareenka ee Haydarpaşa
Meelaha kaydinta ee xarunta Haydarpaşa
Xarunta Haydarpasa Sirkeci
Kiiska Saldhigga Tareenka ee Sirkeci
Aagagga Warehouse ee saldhigga Sirkeci